२ दिन भित्र खाद्यान्नको जोहो गर्न अनुरोध, अब १ हप्ता ठप्प पारिने – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/२ दिन भित्र खाद्यान्नको जोहो गर्न अनुरोध, अब १ हप्ता ठप्प पारिने
थप समाचार –स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी केही समयका लागि डा. समीर अधिकारीले समाल्ने भएका छन्। उनी मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता हुन्।
डा. जागेश्वर गौतम युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल) को प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा सरूवा भएसँगै मन्त्रालयको प्रवक्ता को हुने भन्ने विषयमा चर्चा चलिरहेको छ। मन्त्रालयका उपसचिव दामोदर रेग्मीका अनुसार प्रवक्ता को ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ।
‘अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रवक्ताको जिम्मेवारी डा. अधिकारीलाई दिइएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘प्रवक्तामा को ल्याउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ।’ ११ औं तहमा रहेका डाक्टरलाई प्रवक्ता रूपमा ल्याउन छलफल भइरहेको छ। प्रवक्ताको पद खाली भएको अवस्थामा सहप्रवक्ताको हिसाबले जिम्मेवारी समाल्ने बताए।
‘औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छैन। अर्को व्यक्ति नियुक्त नभएसम्म सहप्रवक्ताकै हिसाबले काम गर्नेछु,’ डा. अधिकारीले भने। उता प्राडा.जागेश्वर गौतमले को-भि’ड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल वीरमा आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन् । आज दिउँसाे वीर अस्पताल पुगेर उनले पदभार सम्हालेका हुन् ।
पदबहाली गर्दै उनले यसअघि आर्जेको सिप, ज्ञान र अनुभवलाई विश्लेषण गर्दै काेभिड अस्पतालहरुको सुधारका लागि आफु क’टिवद्ध भएर लाग्ने प्रतिवद्धता जनाए। यसका लागि योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्दै लैजाने उनले बताए । ‘म यस अस्पतालमा मेरोे रुचीले मात्रै आएको होइन, अहिले वीरलाई कोभिड – १९ को क’माण्डकाे रुपमा चलाउँदा यसले सक्छ कि सक्दैन भन्ने चु’नौतीका साथ सरकारले पठाएको छ ।
अब यस अस्पतालले देशभरको को-भि’डको उपचार गर्ने सम्पूर्ण अस्पतालको क’माण्ड गर्ने भएकाले संक्रमण नियन्त्रणमा अहिलेसम्म कहाँ-कहाँ ग्याप भएको छ, त्यो हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ । जनतालाई सहज उपचार दिनपर्नेछ ।यसका लागि मलाई अस्पतालको सबै कर्मचारीको सहयोग आवश्यक छ ।’
मोबाइल वा कम्युटर बढी हेर्दा आँखा पोलेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुस्
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ भन्छन् – ‘ ढुक्क हुनुस्, अब लोडसेडिङ हुँदैन’